Thai Nepal News:: अमेरिकामै आइफोन बनाउन सम्भव छ त ?
अमेरिकामै आइफोन बनाउन सम्भव छ त ?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले देशभित्रको रोजगारी तथा उत्पादनलाई महत्व दिँदै मेड इन अमेरिकावाला वस्तुहरु हुनुपर्नेमा निकै जोडबल लगाएका छन् । ट्रम्पले भनेजस्तै एप्पललको आइफोन अमेरिकामै उत्पादन गर्नु र चीनमा हुँदै आएको आइफोनको उत्पादन बन्द गर्नु कत्तिको सम्भव छ त ?
ट्रम्पले राष्ट्रपति चुनावकै दौरानमा यदि आफू राष्ट्रपति भएमा एप्पलको उत्पादन अमेरिकी माटोमै ल्याउने घोषणा गरेका थिए । अहिले अमेरिकाका कैयन् ठूला कम्पनीहरुले ट्रम्प प्रशासनलाई खुसी पार्नका लागि अमेरिकाभित्रै रोजगारी र लगानी बढाउने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् । तर यस्तो खुसी पार्ने कार्यमा एप्पल खासै अघि सरेको छैन ।
यद्यपि एप्पलको मुख्य कन्ट्रयाक्टर रहेको फक्सकनले हालै अमेरिकामै फ्लाट प्यानल उत्पादन गर्नका लागि जापानको सफ्टबैंकसँग ७ अर्ब डलरको लगानी सम्झौताको तयारी गरिरहेको पुष्टि गरेको छ ।
फक्सकनका संस्थापक टेरी गोउले भनेका छन्, ‘मैले एप्पललगायत हाम्रो मुख्य साझेदारहरुसँग अमेरिकामै जाने बारेमा कुरा गरेको छु र उनीहरु पनि लगानीका लागि सकारात्मक छन् ।
यस विषयमा फक्सकनले थप विवरण सार्वजनिक गरेको छैन, र एप्पलले पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । ग्लोबल इक्विटी अनुसन्धान विश्लेषक टि्रप चौधरीका अनुसार उत्पादन कार्य अमेरिकामै लग्नु भनेको राजनीति प्रेरित भन्दा पनि विवेकपूर्ण कार्य हो किनकि धेरै उपभोक्ता अमेरिकामै छन् । स्थानीय उत्पादनहरु स्थानीय बजारमै उत्पादन गर्नुपर्ने तर्क उनको छ ।
स्थानीय रुपमा उत्पादन गर्नाले वितरण संजालमा राम्रो पकड कायम हुने र उत्पादकलाई स्थानीय बजारमा वस्तुहरु कस्टमाइज गर्न सहज हुने उनले बताए ।
यद्यपि राजनीति प्रेरित होस् वा नहोस् एप्पल गाडी निर्माताहरुको जस्तो अवस्थामा छैन । गाडी निर्माता कम्पनीहरुले खर्च कटौतीका लागि विश्वका विभिन्न देशमा आफ्ना कम्पनी सारेका छन् । तर एप्पलले भने अमेरिकाका जागिर बाहिर स्थानान्तरण गरेको होइन, नयाँ सिर्जना गरेको हो । विश्लेषक भन्छन्, ‘अमेरिकामा एप्पलले कहिल्यै रोजगारी दिएकै थिएन । सबै आपूर्ति प्रणाली चीनमै विकास भएको हो ।’
एप्पलले एसियामा यस्तो संजालबाट फाइदा उठाउन पाएको छ जुन स्मार्टफोन, ट्याबलेट तथा ल्यापटप एसेम्बल गर्ने सबकन्ट्रयाक्टरको तहभन्दा पनि निकै वृहत छ ।
अमेरिकी कम्पनी एप्पल आफ्ना डिभाइसका लागि पाटपूर्जा बनाउने विभिन्न कम्पनीहरुमा निर्भर छ । यसमा चीन पनि कच्चा पदार्थका लागि राम्रो श्रोत हो । साथै चिनिया सस्तो तथा लचिलो र पर्याप्त श्रम बजारले पनि एप्पललाई सजिलो बनाइदिएको छ ।
इण्डप्वाइन्ट टेक्नोलोजीका विश्लेषक रोजर के का अनुसार चीनको त्यो अवस्थालाई जस्ताको तस्तै अमेरिकी कामदारबाट अमेरिकामा दोहोराउनु निकै गाह्रो हुनेछ । अमेरिकामा रोजगारी सिर्जना गर्ने राजनीतिक महत्वाकांक्षालाई अवमूल्यन गरी धेरै रोबोट र कम जनशक्ति प्रयोग गर्नुपर्नेछ अमेरिकामा ।
प्रविधि विश्लेषक ज्याक गोल्ड भन्छन्, ‘यदि आइफोन बनाउन सबै पार्टस्हरु चीनबाटै मगाउनु पर्छ भने अमेरिकामा आइफोन बनाउनुको कुनै अर्थ छैन ।